Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda oo loo magacaabay 2021 Nobel Peace Prize - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda ayaa loo magacaabay Abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2021.
Magacaabistu waa iftiin rajo ah, oo bixineysa qadarinta dadaalka geesinimada leh iyo geesinimada leh ee xubnaha ololaha adduunka oo dhan kuwaas oo raadinaya inta badan aan la arki karin, shaqada isbeddelka ee waxbarashada nabadda taas oo aasaaseysa aasaaska heshiis kasta oo nabadeed iyo dadaal hub ka dhigis ah.
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (GCPE) ayaa loo magacaabay Abaalmarinta Nobel Peace Prize ee 2021. Magacaabistu waxay u aqoonsan tahay ololaha inuu yahay “mashruuca ugu firfircoon, saamaynta badan, ee fog ee waxbarashada nabadda, sine qua non hub ka dhigista iyo joojinta dagaalka. ”
GCPE-da waxaa si wada jir ah u aqoonsaday seddex magacaabiste: Marwo Marilou McPhedran, Senator, Canada; Prof. Anita Yudkin, Jaamacadda Puerto Rico; iyo Prof. Kozue Akibayashi, Jaamacadda Doshisha, Japan.
Ololaha Caalamiga ah ee loogu talagalay Nabadda Waxbarashada waxaa lagu aasaasay fikrad waxbarasho oo ku saabsan baabi'inta dagaalka, isagoo iftiiminaya baahida aasaasiga ah ee nidaamka beddelka hubka aan hubka ahayn ee amniga adduunka. Ololuhu wuxuu waxbartaa oo u ololeeyaa in la dhiso wacyiga bulshada iyo taageerada siyaasadeed ee loogu talagalay soo bandhigida waxbarashada nabada ee dhammaan dhinacyada waxbarashada, oo ay ku jiraan waxbarashada aan tooska ahayn, dhammaan iskuulada adduunka oo dhan, waxayna dhiirrigelisaa waxbarashada dhammaan macallimiinta si ay u baraan nabadda.
Ololaha waxaa bilaabay barayaasha nabada adduunka oo caan ka ah Betty Reardon iyo Magnus Haavelsrud sanadii 1999 shirkii Hague ee Nabada. Ololuhu wuxuu hadda tiriyaa kumanaan kaqeybgalayaal oo ka kala yimid gees kasta oo adduunka ah. Iyadoo diiradda la saarayo dadaallada maxalliga ah iyo iskaashiga caalamiga ah, Ololaha waxaa loo wada qabtaa sidii dhaqdhaqaaq caalami ah iyada oo loo marayo isweydaarsiga wararka, cilmi baarista, falanqaynta, dadaallada u doodista, dhacdooyinka iyo ilaha. Ololuhu wuxuu bixiyaa aqoon muhiim ah iyo dhiirigelin si loo joogteeyo loona kobciyo waxbarashada nabadda ee maxalliga ah ilaa heerarka adduunka. Isbahaysi ay ku bahoobeen ku dhowaad 200 oo urur, oo mid kastaaba ka shaqeynayo ujeeddooyinkooda ku aaddan gaarista yoolalka Ololaha, wuxuu sii taageerayaa isla markaana sii xoojinayaa dadaallada lagu hormarinayo horumarka nabadeed ee rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn.
Ololuhu wuxuu sii fududeeyaa mashaariic badan oo iskaashi ah iyada oo loo marayo dadaalka walaasheed, Machadka Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (IIPE). IIPE wuxuu si isdaba-joog ah u shiraa, mar kasta oo ka mid ah gobollo adduun oo kala duwan, oo awood u siinaya xubnaha Ololaha inay si shakhsi ah ula kulmaan, wax ka bartaan midba midka kale, ayna bilaabaan mashaariic ka gudubta heer caalami, mararka qaarkoodna xitaa laga gudbo caqabadaha siyaasadeed ee kaliya dadaallada bulshada rayidka ah oo keliya ka gudbi karaan. IIPE waxaa aqoonsaday abaalmarinta UNESCO ee Waxbarashada Nabadda iyadoo si gaar ah loo xuso sanadkii 2002.
Waxbarashada nabadda ee dugsiyada tooska ah: Maxay muhiim u tahay sideese loo qaban karaa? (duubista webinar)
Xusuusashada Abdul Aziz Said
Warbixinta Aqoon-isweydaarsiga Dhallinyarada: Shir-madaxeedka 16aad ee Adduunka ee Abaal-marinta Nobel Peace Prize ee Colombia
February 15, 2017 Warbixinnada Waxqabadka, Dhalinta diirada la saaray 0
Munaasabad gaar ah oo loogu talagalay kaqeybgalka dhalinyarada ayaa lagu qabtay shirkii 16aad ee Caalamiga ah ee abaalmarinta Nobel Peace Prize ee Colombia bishii Febraayo 2, 2017. Aqoon isweydaarsiga, "Gymkana ee Dhallinyarada loogu talagalay Xoojinta Nabadda," waxaa soo qabanqaabiyey Fundación Escuelas de Paz iyo Xafiiska Nabadda Caalamiga. [sii wad akhriska…]
Gorbachev wuxuu ugu baaqayaa Ku guuleystayaasha Nobel Peace Prize inay riixaan Ajandaha Hubka Nukliyeerka
February 7, 2017 Warar & Muuqaal 1
Madaxweynihii hore ee USSR isla markaana ku guuleystay Nobel Prize Peace Mikhail Gorbachev wuxuu ku booriyay kuwa kale ee guuleysta inay ku riixaan hub ka dhigista nukliyeerka iyo hub ka dhigista. Wuxuu xusay in dhamaan guuleystayaasha ay ka mideysan yihiin rabitaanka faafinta fikradaha nabada iyo dhaqanka nabadeed ee udhaxeeya muwaadiniinta gaar ahaan dhalinyarada. [sii wad akhriska…]
Shirweynihii 17-aad ee Nobel ayaa lagu qabtay Mexico, Sebtember 19-22, halkudhiggiisuna ahaa "Calaamaddaada nabad ka dhig." Sannadkan qaar ka mid ah ardayda iyo macallimiinta 1200 ayaa ka qaybgalay, badhkoodna waxay ka yimaadeen Mexico. [sii wad akhriska…]
Saaxiibbadeen ayaa hela magacaabista - #Digniworld